HONDA ကား လေထိုးစက် + ကော်ဘူး အကြောင်း - Myanmar Automobile and Equipment Directory
HONDA ကား လေထိုးစက် + ကော်ဘူး အကြောင်း
နောက်ဝင်လာတဲ့ Honda ကားအများစုမှာ စပယ်ယာဘီး ပါမလာတော့ဘဲ လေထိုးစက် နဲ့ ကော်ဘူးသာ ပါလာတော့တာကို သတိထားမိကြမှာပါ။
ဒါကြောင့် ကားဘီး မတော်တဆ ပေါက်ခဲ့ရင် အရင်လို စပယ်ယာဘီးကို လဲတပ်ပြီး ဆက်မောင်းလို့ မရတော့ပါဘူး။ ပါလာတဲ့ ကော်ဘူး + လေထိုးစက်နဲ့ ကားဘီးကို ကိုယ်တိုင် ဖါပြီး လေထိုးကျွတ်ဖာဆိုင်ကို မောင်းသွားရပါ လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် လေထိုးစက်ကို တစ်ခါမှ မသုံးဖူးရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်း သိမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ အဲဒီလို အခက်အခဲကြုံလာခဲ့ရင် ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ လေထိုးစက် + ကော်ဘူး အကြောင်းနဲ့ သုံးစွဲနည်းကို ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Q : လေထိုးစက်က ဘီးအပေါက် အကျယ်အဝန်း ဘယ်လောက်ထိ ဖာလို့ ရပါသလဲ။
A : တစ်လက်မ ရဲ့ ၁၆ ပုံ ၃ ပုံ ထိဘဲ ဖါလို့ရပါတယ်။ တာယာကွဲသွားတာမျိုး ကိုတော့ ဖာလို့ မရနိုင်ပါ။
Q : ဘီးဖါပြီးရင် နောက်တစ်ခါ ပြန်မပေါက်တဲ့ အထိ ကြိုက်တဲ့ အရှိန်နှူန်းနဲ့ မောင်းနေလို့ ရပါသလား ?
A : မရပါဘူး ။ တာယာ ဖါတဲ့ဆိုင်ကို သွားဖို့ ယာယီဘဲ သုံးသင့်ပါတယ် ။ တစ်နာရီကို 50 ကီလိုထက်လဲ ပို မမောင်း သင့်ပါ။
Q : လေထိုးစက်နဲ့ ကော်ဘူးက အကြိမ်ကြိမ် သုံးလို့ ရပါသလား ?
A : လေထိုးစက်က ကြိမ်ဖန်များစွာ သုံးနိုင်ပေမယ့် ကော်ဘူးကတော့ တစ်ကြိမ်ဘဲ သုံးတာကောင်းပါတယ်။ ကော်ဘူးကုန်သွားရင် ကားပစ္စည်းဆိုင်တွေမှာ ထပ်ဝယ်လို့ ရပါတယ်။
Q : ကော်ဘူးမှာ Expiry သက်တမ်း ရှိပါသလား ?
A : ရှိပါတယ် ။ Kit ထဲမှာ ထင်ထင်ရှားရှား ရေးထားပါတယ်။ သူ့ရဲ့ခန့်မှန်းသက်တမ်း က ပုံမှန်အားဖြင့် ၅ နှစ်ပါ ။
ကား​နောက်​ခန်းမှာပါတဲ့ ​ကော်​ဘူးနဲ့​ လေထိုးစက်ကို ထုတ်ပါ ။ ​ကော်​ဘူး အထုပ်​ကို​ဖောက်​ပါ။ (အထုပ်ထဲတွင်​ ဘားဆံလှည့်​သည့်ကိရိယာ​ ၊ ကော်​ဘူး၊ ဘားဆံအပိုတစ်​ခုနှင့်​ ပိုက်​တစ်​​ချောင်း ပါရှိပါသည်​။) ဘားဆံလှည့်​သည့်​ အတံက​လေးဖြင့်​ ​ပေါက်​သည့်​ဘီးမှ ဘားဆံကိုလှည့်​ဖြုတ်​ပါ။ ပိုက်​ကို ​ကော်​ဘူးတွင်​ အရစ်​ကြပ်​​အောင်​လှည့်တပ်​ပါ။ (​ကော်​ဘူးသည်​ အလိုလို အ​ပေါက်​​ဖေါက်​ပြီးဖြစ်​သွားမည်​။ သီးခြားထိုး​ဖောက်​ရန်​မလိုပါ။)
ပိုက်​အနားတစ်​ဖက်​ကို ဘားဆံချွတ်​ထားသည့်​ ​​ပေါက်​သည့်​ဘီး​ လေထိုး​ပေါက်​တွင်​ ထိုးစွပ်​လိုက်​ပါ။ ​ကော်​ဘူးကို အ​ပေါ်မှ ​ဇောက်​ထိုးထားပြီး အ​ပေါက်​ပမာဏ ​ပေါ်မူတည်​၍ အ​နေ​တော်​ ညှစ်​ထည့်​ပါ။ (အားသုံးပြီး ညှစ်​ရပါသည်​ စိတ်​မချပါက အကုန်​ညှစ်​ထည့်​ပါ။ )​ လေထိုး​ပေါက်​မှ ​ကော်​ပိုက်​ကို ပြန်​ဆွဲချွတ်​ပြီး ​လေထိုး​ပေါက်​အား ဘားဆံပြန်​တပ်​ပါ။ ဘားဆံလှည့်​တန်​ကို ​ကော်​ပိုက်​တွင်​ထိုးတပ်​ထားလိုက်​ပါ။ (ပိုက်​ထဲမှ​ကော်​ရည်​များ ထွက်​မကျ​စေရန်​ဖြစ်​သည်​)
​လေထိုးစက်​ပိုက်​ကို ​လေထိုး​ပေါက်​တွင်​ လှည့်​တပ်​ပါ။​ လေထိုးစက်​ plug ကို ကား​ရှေ့ခန်းတွင်​ပါ​သော cigarette lighter တပ်​သည့်​အ​ပေါက်​တွင်​ မိမိရရ ထိုးတပ်​ပြီး ကားကိုစက်​နှိူးလိုက်​ပါ။​ လေထိုးစက်​ကို ဖွင့်​ပြီး​လေထိုးပါ။ ​လေထိုးစက်​ ဒိုင်​ခွက်​ကိုကြည့်​ပြီး 180 kpa ​ရောက်​ရင်​ ​လေထိုးစက်​ကိုပိတ်​ပါ။ (အ​ပေါက်​​နေရာမှ ​ဆေးရည်​နှင့်​​လေများထွက်​​နေလိမ့်​မည်။ ကိစ္စမရှိပါ။) လေပြန် လျော့/မလျော့ စစ်ဆေးပါ ။ လေမလျော့တော့ပါကပစ္စည်းအားလုံး သိမ်းပြီး ​ကားဘီးဖါရန် အနီးဆုံးနေရာသို့ မောင်းသွားနိုင်ပါပြီ။
မှတ်​ချတ်​။ ။ -ဘီးဖြုတ်​စရာမလိုပါ။ ချိုက်​​ထောက် စရာမလိုပါ။ ​လေထိုးစဉ်​ pressure တက်​မလာပါက ဘားဆံပြန်​ဖြုတ်​ပါ၊ ​လေထိုး​ပေါက်​အတွင်း ၀င်​နိုင်​သည့်​ အ​ချောင်းတစ်​ခုခုဖြင့်​ ကားတာယာအတွင်းသို့ ထိုးပါ။ (​ကော်​ရည်​များ ခဲပြီးပိတ်​​နေလျှင်​ ​လေထိုးမရ ဖြစ်​တတ်​​သော​ကြောင့်​ဖြစ်​ပါသည်​၊ လုပ်​​ဆောင်​မှူမြန်​လျှင်​​တော့ ​ကော်​မခဲပါ) အပိုပါသည့်​ဘားဆံအသစ်​တပ်​ပြီး 180kpa ထိ ​လေပြန်​ထိုးပါ။
Read: ယဉ်စစ်ဆေးရန် အွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့် ရက်ချိန်းယူကာ ပြန်လည်ရောင်းချမှုများ အရေးယူမည်